၀န်ထမ်းဘဝမှ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝသို့ – How She Did It
by Nang Ei Ei Mon
BlogCareer-loving WomenWomen EntrepreneurshipWork-life Integration |5minutes
Writer: Thet Mon Aye
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Global Entrepreneurship Week ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးကကျင်းပကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ How She Did It ကတစ်ပတ်အတွင်း ပွဲငါးပွဲမှာ Women Entrepreneurship နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီပွဲတွေက Building Product For Women, GEW 2018: HR Innovation: Crazy? Not Crazy?, GEW 2018: Mentor Her, Women in Business & Leadership Development, Women Business Idea Competition
အဲ့ဒီပွဲတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ချင်တယ် ideas တွေအများကြီးရှိတယ် ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ idea ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ် ဘာလုပ်ရမလဲသိတယ်၊ ဒါပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမရဘူး (emotional, professional, financial support), လုပ်ငန်းအသစ်စဖို့ အခုလက်ရှိအလုပ်နဲ့ဝင်ငွေကို စွန့်ဖို့အဆင်မပြေဘူး၊ လုပ်ငန်းစလုပ်လာတာ လနဲ့နှစ်နဲ့ကြာပြီ၊ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတာ ခဏခဏ၊ အိမ်ကလည်းဒီထက် မရှုံးခင်ရပ်လိုက်တော့။ ဒါမှမဟုတ် ကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေပြပေးမယ့်သူ (Mentor) မရှိဘူး၊ သင်တန်းတွေမှာလဲ ကိုယ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာ၊ အကြံဉာဏ်တွေမရနိုင်ဘူး စသဖြင့် အမျိုးသမီးစွန့်ဦးတီထွင်သူတွေ ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ကြားရတယ်။
လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုစတင်ရတာ မလွယ်ဘူး၊ အမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ ပိုပြီးမလွယ်ဘူး။ ဥပမာ – အလုပ်ကိုဇောက်ချလုပ်မိရင် မိသားစုတာဝန်လစ်ဟင်းလို့ အပြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရတယ်။ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ/ တန်းတူလက်တွဲလုပ်ရမှာ မနှစ်သက်သူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်။ စီးပွားရေးတိုင်းကခက်ခဲပေမယ့် အမျိုးသမီးလုပ်တဲ့စီးပွားရေးခက်ခဲလာရင် “ပြောသားပဲ၊ ဖြစ်ပါ့မလား၊ ပင်ပန်းပါတယ်” လို့မှတ်ချက်ချကြတယ်။ အသက်နဲနဲကြီးသွားရင် (အသက် ၃၀ ကျော်) လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ နောက်ကျသွားပြီ၊ နည်းပညာတွေလည်းမသုံးတတ်လောက်ဘူး၊ သင်ယူရတာခက်တယ်/ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ညီမလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်မယ်ဆိုရင် အရမ်းငယ်လို့ လူတွေလေးစားမှာမဟုတ်ဘူး လို့ထင်ကြတဲ့သူတွေရှိကြတယ်။ ဒါတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံပြီး self-doubt ဖြစ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် သူများတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ဒီအရေးကြီးဆုံးသုံးခုတော့ ပြင်ဆင်ဖို့အကြံပြုချင်တယ်။
၁) ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု (Skill Gap)
ဝန်ထမ်းလုပ်သက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုတွေက အခုလုပ်ချင်တဲ့ စီးပွားရေးမှာ အသုံးချရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တာ၊ လိုအပ်မှုတွေရှိနေတာတွေကို ကြိုသိနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကို သေချာစောစောဆန်းစစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်အတွက် မြန်မြန်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းကို လွယ်ကူအောင် သုံးမျိုးခွဲပြီး ဆန်းစစ်လို့ရတယ် – Hard Skills, Soft Skills နဲ့ Business Skills။ မူကြိုဆရာမ လုပ်ခဲ့ပြီး မူကြိုကျောင်းဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်တာဆိုရင် ကိုယ့်မှာ Hard skills ဆိုတဲ့ early childhood education ကိုကျွမ်းကျင်တာ၊ Soft skills ဆိုတဲ့ ကလေးတွေ/မိဘတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာ ကျွမ်းကျင်တာရှိပြီးသားဖြစ်မယ်။ ထပ်ဖြည့်ရမှာက Business skills ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်ပတ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ marketing, team building, accounting စတာတွေသိဖို့ လေ့လာရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် မူကြိုဆရာမဘဝကနေ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် Hard Skills ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရောင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းနားလည်မှု၊ ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာအတတ်ပညာတွေထပ်ဖြည့်ရမယ်၊ Soft skills ဆိုတဲ့ ကုန်သည်တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာ၊ ဈေးစ်တာ စတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာတွေလုပ်တတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ရမယ်၊ Business skills ဆိုရင်လည်း ကျောင်းထောင်တဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ accounting process နဲ့ ကုန်သည်လုပ်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ accounting process ကမတူဘူး၊ inventory control ကိုပိုနားလည်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သိရမယ့်အရာကိုကြိုသိနိုင်လေ ခုန်ကူးရတဲ့အခါ ရဲရဲတင်းတင်းခုန်နိုင်လေလေပေါ့။
၂)ဈေးကွက်အနေအထား (Market Knowledge)
မူကြိုကျောင်းထောင်မယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ မူကြိုဘယ်နှစ်ကျောင်းရှိပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်လိုမူကြိုမျိုးလဲ – montessori ကဘယ်နှစ်ကျောင်းလဲ၊ local ကဘယ်နှစ်ကျောင်းလည်း၊ ကလေးသူငယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ချမှတ်ထားတဲ့ law တွေကဘာတွေလဲ၊ ဆရာဆရာမတွေကို သင်တန်းပေးတဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်း သိဖို့လိုတယ်၊ သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်။ နောက်ပြီး အခုဆိုရင် လုပ်ငန်းကြီးတွေက သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကို ကလေးမွေးပြီးလဲ အလုပ်ပြန်ဝင်နိုင်အောင်စီစဉ်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်မူကြိုက သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကို ဝန်ဆောင်မူပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ချိတ်ဆက်လို့ရတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီလိုရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ HR policy ကဘာတွေလဲ၊ သူတို့ရုံးကဘယ်ရပ်ကွက်မှာရှိလည်း ဒါတွေလည်းသိနိုင်ဖို့ လိုတာပေါ့။
ကိုယ့်ရဲ့ customer က ကလေးမိဘတွေသာမက အဖိုးအဖွား၊ဦးလေးအဒေါ်ဆွေမျိုးတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တာမမေ့ဖို့လိုတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ စကားတွေများများပြောဖို့လိုတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကိုမူကြိုမထားဘူးဆိုရင် alternative solution ကဘာတွေလဲ? အိမ်မှာပဲကလေးထိန်းနဲ့ထားတယ်၊ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ထိန်းတယ်၊ ကလေးကစားကွင်းပို့တယ်၊ ကလေးသင်တန်းတွေပို့တယ်။ ဒါတွေကိုသိတဲ့အခါ ကလေးမိဘတွေရဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပုံကို ပိုပြီးနားလည်နိုင်မယ်၊ သူတို့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မယ့် childcare solution တစ်ခုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို ပိုပြီးစဉ်းစားတတ်လာမယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုက သူများနဲ့မတူထူးခြားတယ်၊ လိုက်တုဖို့ခက်တယ်။
ကျွန်မတို့ How She Did It က ခဏခဏပြောနေတဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါ။ကျွန်မတို့ အကူးအပြောင်းကာလမှာ ကိုယ့်ကို စိတ်အား၊လူအား အနည်းဆုံး တခုခု support ပေးနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ/မိတ်ဆွေတွေ ရှိဖို့ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ တယောက်ထဲ လုပ်ယူလို့မရတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ်နားလည် လက်ခံမှုရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေသာ ရှိနေရင် အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်အင်အားပိုရှိတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝက တစ်ခါတစ်လေ အထီးကျန်ဆန်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကို ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောပြလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတတ်တယ်၊ ကိုယ့်အလုပ်ပြဿနာတွေကို မိသားစုဝင်တွေကိုမပြောပြချင်တာတွေလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ကိုယ်လိုအပ်နေတဲ့ support ကဘယ်လို support မျိုးလဲခွဲခြားသိနိုင်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှ အဲ့ဒီ support ကိုဘယ်သူတွေဆီမှာ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ရယူနိုင်မလဲဆိုတာကို စီစဉ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ – လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အခါ mentor တွေနဲ့တိုင်ပင်လို့ရတယ်၊ ကိုယ့်လိုပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ မျှဝေတိုင်ပင်လို့ရတယ်။ အလုပ်နဲ့မိသားစုကြားမနိုင်မနင်းဖြစ်လာတဲ့အခါ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမျှဝေလို့ရတယ်၊ ဒါမှသူတို့ဘယ်လိုပံ့ပိုးလို့ရမလဲဆိုတာကို သိနိုင်မယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်ဘဝဆိုတာ ထင်သလောက်မလွယ်သလို ခံယူချက်မှန်မှန်နဲ့လုပ်နိုင်ရင် စံစားရတာက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရော။ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါ လူတွေကို လုပ်အားခပေးပြီး သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်ပြေစေတယ်၊ ကိုယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ product/services တွေက customer တွေရဲ့ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်စေတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်ဘဝက ရင်းရတဲ့အချိန်၊ ငွေ၊ လူနဲ့စိတ် အင်အားအတွက်တန်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှလုပ်ဖို့ပါ။
အခုပြောသွားတဲ့အချက် သုံးချက်ထဲက ဘယ်အချက်ကကိုယ့်အတွက် ပြင်ဆင်ရတာအခက်ခဲဆုံးလဲ?
#HowSheDidIt #WomenEntrepreneurship #MentorHer